Yintoni i-Spread kwi-Forex-Ukusasazeka kwiNtengiso yoRhwebo eChaziweyo
Education - Amanqaku kunye tutorials - amanqaku asekelwe ngaphambili - Yintoni eyasasazwayo ngoRhwebo lweMali?
Abarhwebi benza imali ngokuthengisa imali kubarhwebi ngaphezulu kwemali abayihlawula ukuze bayithenge.
Abarhwebi benza imali ngokuthenga imali kubarhwebi ngemali engaphantsi kwale bahlawula ukuyithengisa.
Lo mahluko ubizwa ngokuba usasazekile.
Kuthetha ukuthini ukusasazeka?
Ukusasazeka kulinganiswa ngokweepips eziyinto encinci yokuhamba kwamaxabiso kwisibini semali. Ilingana no-0.0001 (inqaku lesine lexabiso kwixabiso lesicatshulwa). Oku kuyinyani kuninzi lwababini abakhulu ngelixa iJapan Yen ngababini benendawo yesibini njengepayipi (0.01).
Xa ukusasazeka kubanzi, kuthetha umahluko phakathi kwe- “Bhidi” kunye no “Buza” uphezulu. Ke, ukuguquguquka kuya kuba phezulu kwaye i-liquidity iya kuba phantsi. Ngakolunye uhlangothi, ukusasazeka okuncinci kuthetha ukungazinzi okuphakathi kunye nokufuma okuphezulu. Ke, iindleko zokusasaza ziya kuba zincinci xa umrhwebi ethengisa isibini semali ngokusasazeka ngokuqinileyo.
Ubukhulu becala iarhente yemali ayinakhomishini kurhwebo. Ke ukusasazeka kokuphela kwendleko ekufuneka abarhwebi kufuneka bayithwale. Uninzi lwabathengisi be-forex ababizi ikhomishini; ngenxa yoko, bafumana umvuzo okwanda. Ubungakanani bokusasazeka buxhomekeke kwizinto ezininzi njengokuqina kwemarike, uhlobo lomthengisi, isibini semali, njl.
Ukusasazeka kuxhomekeke entwenini?
Isalathiso sokusasazeka sidla ngokuboniswa ngohlobo lwejika elisegrafu elibonisa umkhombandlela osasazeke phakathi kwamaxabiso “Buza” kunye “Bhidi”. Oku kunokunceda abathengisi ukuba babone ngamehlo engqondo ukusasazeka kwesibini esiyimali ngaphezulu kwexesha. Ezona zibini zibisi zisasazeke ngokuqinileyo ngelixa izibini ezingafaniyo zisasazeke ngokubanzi.
Ngamazwi alula, ukusasazeka kuxhomekeke kukwehla kwentengiso yesixhobo semali esinikiweyo, okt. Ukuphakama kokungena kwesinye isibini semali, kuncipha ukusasazeka. Umzekelo, i-EUR / i-USD isibini sesibini esithengiswayo; ke, ukusasazeka kwi-EUR / USD pair yeyona iphantsi phakathi kwazo zonke ezinye izibini. Kukho ezinye izibini ezikhulu ezinjenge-USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD, USD / CAD, njl njl. Kwimeko yababini abangaphandle, ukusasazeka kunamathuba amaninzi amakhulu xa kuthelekiswa nezibini ezikhulu kwaye oko konke ngenxa yokuncipha kwamanqatha kwizibini ezibini.
Nakuphi na ukuphazamiseka kwexesha elifutshane ukuya kwi-liquidity kubonakala kusasazeka. Oku kubhekisa kwiimeko ezinje ngokukhutshelwa kwedatha ye-macroeconomic, iiyure apho kutshintshiselwano olukhulu emhlabeni kuvaliwe, okanye ngexesha leholide ezinkulu zebhanki. Ukunyanzelwa kwesixhobo kuvumela ukumisela ukuba ngaba ukusasazeka kuya kuba kukhulu okanye kuncinci.
Ukuguquguquka kweemarike kunokuchaphazela ukwanda kwe-forex. Umzekelo, isibini semali sinokufumana amaxabiso ashukumayo xa sikhululwa kwiindaba ezinkulu zezoqoqosho. Ke, ukusasazeka kuchaphazeleka ngelo xesha.
Ukuba ufuna ukunqanda imeko xa usasazeka usiya kakhulu, ke kufuneka uneliso kwikhalenda yeendaba ye-forex. Kuya kukunceda ukuba uhlale unolwazi kwaye ulwe nokusasazeka. Njengedatha yeefizi zokuhlawulwa kweefama ezingezizo ezefama zase-US zizisa ukuhla okuphezulu kwintengiso. Ke ngoko, abarhwebi banokuhlala bengathathi hlangothi ngelo xesha ukunciphisa umngcipheko. Nangona kunjalo, iindaba ezingalindelekanga okanye idatha kunzima ukuyilawula.
- Umthamo wokurhweba
Iimali ezinamanani aphezulu orhwebo zihlala zisasazeka njenge-pairs ye-USD. Ezi zibini zinamanzi amaninzi kodwa ezi zibini zinomngcipheko wokwanda kokuphakathi kweendaba zoqoqosho.
- Iiseshoni zokurhweba
Ukusasazeka kunokwenzeka ukuba kuhlale kuphantsi ngexesha leeseshoni ezinkulu zentengiso ezinjengeSydney, New York neLondon iiseshoni, ngakumbi xa iiseshoni zaseLondon naseNew York zidibana okanye xa iseshoni yaseLondon iphela. Ukusasazeka kuchatshazelwa yimfuno ngokubanzi kunye nokunikezelwa kwemali. Ukufunwa okuphezulu kwemali kuya kukhokelela ekusasazeni okuncinanana.
-Ukubaluleka kwemodeli yomthengisi
Ukusasaza kuxhomekeke kwimodeli yeshishini yomrhwebi.
Abenzi beemarike ikakhulu babonelela ngokusasazeka okuzinzileyo.
Kwimodeli ye-STP, inokuba sisasazelelo okanye esisasazeko.
Kwimodeli yeECN, sinokusasazwa kwemarike kuphela.
Zonke ezi ntlobo zomthengisi zinazo iinzuzo zazo kunye nezixhobo.
Zeziphi iintlobo zokusasazeka ezikwi-Forex?
Ukusasazeka kungalungiswa okanye kuguqulwe. Njenge, ii-indices ziye zasasazeka ikakhulu. Ukusasazeka kweebini ze-Forex kuyahluka. Ke, xa ibhidi kwaye ubuza amaxabiso zitshintsha, ukusasazeka nako kutshintsha.
1. Ukusasazeka okuzinzileyo
Ukusasazeka kusekwe ngabarhwebi kwaye abatshintshi ngaphandle kwemeko yentengiso. Umngcipheko wokuphazamiseka kwe-liquidity ukwicala lomthengisi. Nangona kunjalo, abathengisi bagcina ukusasazeka okuphezulu kolu hlobo.
Umenzi wentengiso okanye abathengisi beedesika abathengisa banikezela ngokusasazeka. Abarhwebi abanjalo bathenga izikhundla ezinkulu kubanikezeli bezinto ezingamaphepha kwaye emva koko banikezela kwezo zikhundla kwiinxalenye ezincinci kubathengisi abathengisayo. Abarhwebi ngokwenyani basebenza njengezenzo ezichasene nezorhwebo lwabathengi babo. Ngoncedo lwedesika eqhubayo, abarhwebi be-forex bayakwazi ukulungisa ukusasazeka kwabo njengoko bekwazi ukulawula amaxabiso aboniswe kubaxumi babo.
Njengoko ixabiso livela kumthombo omnye, ngenxa yoko, abathengisi banokujongana neengxaki rhoqo. Kukho amaxesha ngamaxesha apho amaxabiso amaxabiso esambatho semali atshintsha ngokukhawuleza phakathi kokuguquguquka okuphezulu. Kuba ukusasazeka kuhlala kungaguqukanga, umthengisi akazukukwazi ukwandisa ukusasazeka ukuze uhlengahlengiso kwiimeko zentengiso zangoku. Ke ngoko, ukuba uzama ukuthenga okanye ukuthengisa ngexabiso elithile, umrhwebi akasayi kuvumela ukubeka iodolo endaweni yoko umthengisi uza kukucela ukuba wamkele ixabiso elifunwayo.
Umyalezo wesicelo uza kubonakala kwisikrini sakho sokurhweba ukwazisa ukuba ixabiso lihambile kwaye ukuba uyavuma ukwamkela ixabiso elitsha okanye hayi. Eyona nto inexabiso elibi kunexabiso lakho loku-oda.
Xa amaxabiso ehamba ngokukhawuleza kakhulu, unokujongana nomba wokutyibilika. Umrhwebi unokungakwazi ukugcina ukusasazeka okuzinzileyo kwaye ixabiso lakho lokungena linokuhluka kunexabiso lakho.
2. Ukusasazeka okuguqukayo
Kolu hlobo, ukusasazeka kuvela kwimarike kwaye umrhanisi uhlawulisa iinkonzo zakhe ngaphezulu kwayo. Kule meko, umthengisi awunabungozi ngenxa yokuphazamiseka kwe-liquidity. Abarhwebi badla ngokukunandipha ukusasazeka okuqinileyo ngaphandle kweentshukumo zentengiso eziguqukayo.
Abathengi beedesika abangasaphangeliyo banikezela ngokusasazeka okwahlukileyo. Abarhwebi abanjalo bafumana amaxabiso abo okufumana ixabiso lesibini kubanikezeli beenkcitho ezininzi kwaye abathengi banika amaxabiso ngokuthe ngqo kubathengisi ngaphandle kokungenelela kwedesika yokuthengisa. Oko kuthetha ukuba abanakho ukulawula kokusasazeka kwaye ukusasazeka kuya kunyuka okanye kunciphise kuxhomekeka ngokuzinzileyo kwintengiso kunye nokunikezela kunye nemfuno yeemali.
Thelekisa ukusasazeka kunye nokuhluka okusasazwayo
Ezinye zezinto ezilungileyo kunye neendlela ezinobungozi zokusasazeka okusisigxina kunye nokuhluka kuxoxwa ngazo apha ngezantsi:
Ezinye izibonelelo kunye nokusilela kwezi ntlobo zimbini zosasazo zichazwe apha ngezantsi:
Umngcipheko wokufaka isicelo awukho
Iindleko zotshintshiselwano zinokuqikelelwa
Iindleko zotshintshelo azihlali zixelwa kwangaphambili
Imfuno eyinkunzi incinci
Imfuno eyinkunzi inkulu.
Ifanelekile kubarhwebi abaphambili
Intengiso eguqukayo ayichaphazeli ukwanda
Ukusasazeka kunokwandiswa ngamaxesha okuguquguquka okuphezulu
Zisasazwa njani iindlela zokurhweba kwi-Forex yorhwebo?
Ukusasazeka kubalwa phakathi kwexabiso lamaxabiso ngenani elikhulu lokugqibela kunye nexabiso lebhidi. Amanani amakhulu okugqibela yi-9 kunye ne-4 kumfanekiso ongezantsi:
Kuya kufuneka ubhatale ngaphambili ukuba urhweba ngeCFD okanye usasaza iakhawunti. Oku kuyafana nekhomishini ehlawula abarhwebi ngelixa irhweba izabelo ii-CFD. Abarhwebi bahlawuliswa ukungena nokungena kurhwebo. Ukusasazeka okunamandla kuyathandeka kakhulu kubarhwebi.
Umzekelo: Ixabiso lebhidi yesibini se-GBP / JPY yi-138.792 ngelixa ixabiso lokucela lili-138.847. Ukuba uthabatha i-138.847 ukusuka kwi-138.792, ufumana u-0.055.
Njengokugqibela inani elikhulu lesibalo samaxabiso sisiseko sokusasazeka; ngenxa yoko ukusasazeka kuyalingana ne-5.5 pips.
Buyintoni ubudlelwane bemarike kunye nokusasazeka?
Unokuba nomngcipheko wokufumana umnxeba we-margin ukuba i-forex isasazeka ngokubanzi kwaye imeko embi kakhulu, izikhundla zichithwa ngokuzenzekelayo. Nangona kunjalo, umnxeba we-margin wenzeka kuphela xa ixabiso le-akhawunti lehla ngezantsi kwe-100% yeemowudi zemida. Ukuba iakhawunti ifikelela ngaphantsi kwe-50% yemfuno, zonke izikhundla zakho ziya kupheliswa ngokuzenzekelayo.
Ukusasazeka kwe-Forex ngumahluko phakathi kwexabiso lokucela kunye nexabiso lebhanti lesibini se-Forex. Ngokwesiqhelo, kulinganiswa ngeepips. Kubalulekile ukuba abarhwebi bazi ukuba zeziphi izinto ezinefuthe ekuguquguqukeni ekusasazeni. Iimali ezinkulu zinamanani aphezulu orhwebo; kungoko ukusasazeka kwabo kuphantsi ngelixa izibini ezingafaniyo zisasazeke ngokubanzi phakathi kolwelo oluncinci.